ဒီ Proxy ဆိုဒ်လဲအဆင်ပြေနိုင်မှာပါ
Proxy နှင့်ပါတ်သတ်လို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့....ဒီမှာဝင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
Posted by P Kyaw Swa at 1:23 PM
ကိုစေတန်ဂေါ့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Route Map
Posted by P Kyaw Swa at 5:20 PM
ဒို့မြန်မာတွေ ပုဆိုးကျိုက်ပြီးတော့ ကျော်ကြတယ်(သို့) proxy ကျော်မယ်(ကျော်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း)
ကဲ ကျော်ကြမယ် ခွကြမယ်။ ကျနော် စမ်းသပ်ထားတဲ့ proxy ပါ စမ်းသုံးကြည့်ကြပေါ့။ အဆင်မပြေရင် မပြေလို့မှတ် ပြေရင် ပြေတယ်ပေါ့။
Posted by P Kyaw Swa at 5:01 PM
Facebook Themes လေးများနဲ့သုံးချင်သူများအတွက်ပါ..
facebook လေးကို Design အမျိုးမျိုးနဲ့သုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့အကြိုက်တွေ့ စေမှာပါ။ေ၇ွးချယ်စ၇ာ Design လေးတွေကလဲအများကြီးပါပဲစိတ်ကြိုက်ေ၇ွးပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
1. အ၇င်ဆုံးမိမိတို့၇ဲ့ Facebook လေးကို Login ၀င်ထားလိုက်ပါ။
2. ပြီး၇င် ဒီလင့်လေး https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/stylish/ ကနေသွားပြီးတော့ Firefox Add-on လေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Firefox
လေးကို restart ပေးလိုက်ပါ။
3. Firefox Add-on လေးကို Install လုပ်ပြီးပြီဆို၇င် မိမိတို့စိတ်ကြိုက် Themes လေးတွေ
ကိုေ၇ွးချယ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Facebook Themes Gallery ကို ဒီလင့်လေး http://userstyles.org/styles/browse/all/facebook ကနေသွားလိုက်ပါ။
4.မိမိတို့စိတ်ကြိုက် Themes လေးတွေကို Links လေးတွေကိုကြည့်ပြီးေ၇ွးချယ်နိုင်ပါတယ်။
5.စိတ်ကြိုက်တွေ့ ပြီဆို၇င်တော့ Install ဆိုတဲ့အောက်က Install with stylish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး
6.ပြီးပြီဆို၇င်တော့မိမိတို့ ၇ဲ့ Facebookလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။မိမိတို့ရွေးးချယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းလဲ
7.နာက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုလေးပြောင်းသုံးချင်လို့အခုသုံးနေတာလေးကို မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် Firefox ထဲက Tools ကိုသွားပါ။ပြီး၇င် Add-on ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Add-on Box လေးကျလာပါ
8.User style ကိုသွားပါ။ပြီး၇င်ေ၇ွးထားတဲ့ Themes လေးကို Disable ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆို
Online Converter...... အလန်းလေးနော်။
လဝန်းညို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ် ထင်ရာမြင်ရာ လျှောက်သွားရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတယ့် ဆိုဒ်ကလေးပါ။ ဒီဆိုဒ်ကလေးမှာ Media File တွေ Document File တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တယ့် Format ပြောင်းခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဘာ Software မှ Install လုပ်စရာမလိုတယ့် Online Converter လေးပါ။ သီချင်းတွေကို Mp3, ACC, စတယ့် Format ကိုပဲပြောင်းပြောင်း Video File Mp4, 3gp, mkv စတယ့် Format ကိုပဲပြောင်းပြောင်း အိုစုံစုံပြောရရင် .doc Format ကိုတောင်မှ ဘာ Software မှမလိုပဲ .Pdf File အနေနဲ့ ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ ဆိုဒ်လိပ်စာကတော့ www.online-convert.com ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆိုဒ်ကို စဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ့် ကိုယ်ပြောင်းချင်တယ့် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး Converter Type ပေါ်မှာရှိတယ့် Drop Down Menu လေးထဲမှာ ကိုယ်ပြောင်းမယ့် Target Forဒုmat ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်မျက်နှာမှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တယ့် File လေးကို Browse လုပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ သုံးရတာ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်ဘာ File Type ကိုပဲပြောင်းချင်ပြောင်းချင် လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ Internet Connection လေးရှိနေယုံနဲ့ ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်ကြိုက်တယ့် သီချင်းလေးတွေကို Mp3, Mp4, ပြောင်းဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးထားတယ့် စာလေးတွေကို Ebook ပြောင်းဖို့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ Converter တွေလိုက်ရှာနေရတယ့် ဒုက္ခတွေ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း...........
Posted by P Kyaw Swa at 12:51 AM
Command Prompt (CMD) Properties ကိုဝင်ကြည့်ခြင်း
ဒါဘော်ဒါတို့ရဲ့ စက်ထဲမှာရှိတယ့် Command Prompt (CMD) မှာရှိတဲ့ ရိုးအီနေပြီးသား အမဲရောင် Screen Background ကြီးကို အသစ်အဆန်းလေး ဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းကြည့်ချင်တဲ့ သူများအတွက်ပါ။ အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ် သိပြီးသားသူများလည်း ရှိမှာပါ ခုဟာက မသိသေးတယ့် သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်လို့ သိပြီးသူများကတော့ သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြပေါ့ မဖတ်ချင်လည်း ကျော်ခွသာသွားလိုက်ကြပါ ။ ကဲကဲ စပြောမယ်နော်.........
(၁) အရင်ဦးဆုံး ပထမ အဆင့်အနေနဲ့Start ကနေ Run ကိုသွားပြီး ပေါ်လာတယ့် Run Box ထဲမှာ CMD လို့ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
(၂) ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ အမဲရောင် CMD Window ကြီးရဲ့ Title Bar ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ဆိုတာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
(၃) နောက်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ CMD Properties Pop up Window မှာ Colors ဆိုတယ့် Tab လေးကို ဆက်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
(၄) ပြီးရင်တော့ ပုံပေါ်မှာ မျဉ်းတားထားပေးတဲ့ Screen Text မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်ကို ရွေးပါ သူကကိုယ့် CMD ထဲမှာပေါ်မယ့် စာအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Screen Background မှလည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အရောင်လေးရွေးပေး ဒါကတော့ နောက်ခံအရောင်ပေါ့ အားလုံးပြီးလို့ OK လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ့် CMD Window လေးမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အရောင်ရပြီပေါ့။ ကျွန်တော်ပြောသားပဲ အရမ်းလွယ်ပါတယ်ဆို.....
ဒါက ကျွန်တော်ပြောင်းထားတယ့် အရောင်လေးပါ။ မိုက်တယ်မဟုတ်လား........ ကိုယ့်စက်ကလေးကို သူများတွေထက် ခေတ်မှီလှပပြီး သူများနဲ့ မတူအောင် စတိုင်ကျချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
Posted by P Kyaw Swa at 12:45 AM
ဒို့မြန်မာတွေ ပုဆိုးကျိုက်ပြီးတော့ ကျော်ကြတယ်(သို့...